Hodan Xasan: Musharax u taagan Kursiga Aqalka Sharci-dejinta ee Minnesota -
Hodan Xasan ayaa si rasmi ah u shaacisay in ay tahay musharax u taagan Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Degmada 62A ee magaallada Minneapolis u matala gobolka Minnesota.
Axaddii ay bisha January ahayd 7, 2018 ayaa hoolka shirarka iyo xafladaha ee Safari Restaurant waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay musharax Hodan Xasan oo u tartamaysa Guddoonka Golaha Wakiillada ee degmada 62A, magaallada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Munaasabaddan oo si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, aqoonyahanno isugu jiray rag iyo haween, ganacsato, abwaanno, qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha laga soo doorto gobolka Minnesota iyo waliba waxgarad kale oo dhammaantood musharax Hodan Xasan u muujiyey taageero ballaaran.
Haddaba munaasabaddan sida ballaaran loogu taageeray musharax Hodan Xasan ayaa ahayd mid aad iyo aad uga duwan kulamada siyaasadeed ee looga bartay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Boqollaal qof oo taageeraya musharaxnimada iyo loollanka ay Hodan Xasan ugu jirto kursiga Guddoonka Golaha Wakiillada ee degmada 62A ayaa soo buux dhaafiyey goobtii ay munaasabbaddu ka socotay.
Dadkii tirada badnaa ee u soo baxay taageerada Hodan Xasan ayaa hiil iyo hooba la garab istaagay Hodan, waxayna dhamaan ballan qaadeen inay sii wadayaan taageerada ay u hayaan Hodan ilaa iyo inta ay ku guulaysanayso loollanka ay ugu jirto kursiga Guddoonka Golaha Wakiillada ee degmada 62A.
Musharax Hodan Xasan oo ah hogaamiye caan ka ah jaalliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa ah qof waayo aragnimo, karti, iyo weliba aqoon u leh adeegga bulshada. Hodan ayaa ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed ee haweenka ah ee iyagu had iyo jeer u taagan waxqabadka iyo horumarinta qoysaska Soomaaliyeed, dhallinyarada, ganacsatada iyo guud ahaanba jaalliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota.
Hodan oo madasha ka hadashay ayaa u mahadcelisay dhamaan marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda musharaxnimadeeda lagu taageerayay. Waxayna jeedisay khudbad aad u qiimo badan oo ay uga hadashay sababta ku kalliftay inay u tartanto kursiga Guddoonka Golaha Wakiillada ee degmada 62A.
Musharax Hodan ayaa sheegtay arrimaha ay ahmiyad dheer siinayso, waxna ka qabanayso, oo ay xooggana saarayso in ay yihiin baahida loo qabo guryaha, waxbarashada, caafimaadka, ka hortagga gardarrada booliisku ay ku hayaan dadka ama jaalliyadaha laga tiro badany ahay, kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka iyo waliba is dhex-galka bulshada kala duwan ee ku dhaqan degmada 62A iyo guud ahaanba gobolka Minnesota.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa Hodan waxay taageero buuxda ka helayey qaar kamid ah siyaasiyiin, madax laga soo doorto gobolka Minnesota iyo ururada u ololeeya isbedelka iyo horumarka siyaasadeed ee gobolka Minnesota.
Wixii akhbaar dheerad ah ee ku saabsan ololaha doorashadda Hodan Xasan waxaad ka daalacan kartaa bogga ama website-ka http://hodanforhouse.com
Related Items:Featured, Hodan Hassan, Somali community, Somali Minneapolis